Aretina sy bibikely mpanimba ny katsakaHanova
Maro ny bibikely sy ny kantsentsitra manimba ny katsaka. Karazany maro ny holatra izay manimba ny fakan’ ny katsaka sy ny tahony ary ny babiny, izay miteraka fahalovany ka mampihena ny habe sy ny hatsaran’ ny voan-katsaka. Ireto ny aretina sasany vokatry ny holatra mahazo ny katsaka, dia ny aretina ateraky ny Fusarium roseum sy ny Helminthosporium turcicum, ary ny Ustilago zeae, izay miteraka zavatra fibontsinana amin’ ny babin-katsaka sy ny tahony ary ny voniny. Mihamainty izany rehefa antitra. Miteraka fihenan’ny vokatra izany. Misy koa aretina vokatry ny virosy izay manabotry ny katsaka. Afaka mifindra ireo aretina ireo. Misy koa ireo bibikely mihinana ny fakan’ ny katsaka.
Famokarana sy fampiasana ny katsakaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Katsaka&oldid=1038883"
Dernière modification le 13 Oktobra 2021, à 11:22